Fanaanadii ugu horeysay ee Afka Soomaaliga ku heesta oo lagu aasayo magaalada Hargeysa | Jowhar Somali News Leader
Fanaanadii ugu horeysay ee Afka Soomaaliga ku heesta oo lagu aasayo magaalada Hargeysa
Allaha u naxariistee fanaanadii ugu horeysay ee ku heesta hees Soomaali ah Shamis Abuubakar Ismaaciil ayaa gelinka dambe ee maanta lagu aasayaa magaalada Hargeysa kadib markii ay muddo dheer xanuunsanayd.
Shamis Abuubakar oo loo yiqiin Gaduudo Carwo ayaa muddo kabadan labaatan sano xanuunsanayd waxayna geeriyootay iyadoo 82 sano jir ah.
Gaduudo Cawro waxaa ay ka mid ahayd Dumarkii soomaaliyeed ee fanka ugu horeeyay ee ka heesa goob fagaare ah, waxaa ay ka tirsanayd kooxdii caanka ahayd ee Waaberi.
Sanadkii 1952 ayay kusoo biirtay fanka waxayna ahayd gabadhii u horeysa ee Soomaalida goob fagaare ah ka heesta islamarkaana idaacada laga dhageysto.
“Innaa Lillaahi wa innaa ileyhi raajicuun, waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan eheladi iyo qoyskii ay ka baxday Allaha u naxariistee Gaduudo Carwo oo ka mid aheyd fanaaniinta ugu magaca dheer dalkeenna Soomaaliya” ayuu yiri Eng: Yariisoow.
Next articleMaxkamad ku taal dalka Canada oo dambi ku heshay Muwaadin Soomaali ah